5 ဥရောပမှာတော့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်နေရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပမှာတော့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်နေရာများ
ဥရောပအစိတ်အဆိုတော်နှင့်ရုပ်ရှင်ကမ္ဘာအနှံ့မှ, ဒါကြောင့်အဲဒါကိုရောနှောရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူကိုဆွဲဆောင်ကြောင်းအံ့သြစရာမရှိပါဖြစ်ပါတယ်! ရှာဖွေတွေ့ရှိ5ဥရောပ၌နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်နေရာများ နှင့် စာအုပ်သင့်ရဲ့အားလပ်ရက် နှင့် လှုပ်ရှားမှုများ ဥရောပနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံအားလပ်ရက်များအတွက်သင်အကြိုက်ဆုံးဇာတ်ကားအတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဗတ္တိဇံပေးရန် အကောင်းဆုံးဦးတည်ရာနေရာများ.
မီးရထားလမ်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောခရီးသွားခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်. ဤဆောင်းပါးသည်ရထားခရီးသွားအကြောင်းကိုပညာပေးရန်စာဖြင့်ရေးသားခဲ့သဖြင့်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည် ကမ်ဘာပျေါတှငျစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ဦးကရထား Save.
1. ဥရောပမှာတော့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်နေရာများ: Notting ကုန်း, လန်ဒန်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ
ရုပ်ရှင်များတွင်မင်းသား Hugh ထောက်ပံ့ရေးမျက်လုံးပြာကိုသတိရပါ Notting ကုန်း? ရှာဖွေတွေ့ရှိ Notting ကုန်း, လန်ဒန်အများဆုံးများထဲမှ လှပသောသောနေရာများ နှင့်အရှိဆုံးမှအိမ်ပြန် quintessentially ဗြိတိန် rom-com. ဒီရုပ်ရှင်မဆိုကြည့်ရှုကိုမမစနိုင်ပေမယ့်သင်အနည်းငယ်ပိုကောင်းခံစားရပါစေ ... Notting Hill ကအကြောင်းကိုအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကအများကြီးအလယ်ပိုင်းလန်ဒန်မြို့တွင်ရိုက်ကူးခဲ့ကွောငျးဖြစ်ပါသည်! ဒါကကိုဆိုလိုတယ်သင်ကသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါအများအပြားအထင်ကရနေရာများမှာပြထားတဲ့ရုပ်ရှင်!
ဖွင့်လှစ်အတွက်မြင်ကွင်းများ, Hugh ထောက်ပံ့ရေးဇာတ်ကောင်, ဝီလျံ Thacker အဆိုပါ Portobello လမ်းမကြီး Market ကတဆင့်သွားလာ. ကအများဆုံးအထင်ကရ Notting Hill ကရိုက်ကူးမှုတည်နေရာများထဲကတစ်ခုဖြစ်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကကမ္ဘာကျော်စျေးကွက်မသာသွားရောက်ရကျိုးနပ်သည်, စျေးကွက်ကိုယ်တိုင်ကရိုးရိုးလှပဇာတ်ဆောင်ရှေးဟောင်းပစ္စည်းအပြည့်အဝရှိသောကြောင့်ပေမယ့်ကိုယ့်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေ.
နောက်တစ်ခု, ငါတို့သည်သင်တို့သေတမ်းစာစာအုပ်ဆိုကူးခေါင်းအကြံပြု, 142 Portobello လမ္း. အနည်းငယ်ဆိုင်ကပိုင်ဆိုင်မည်အတွက်ဇာတ်ကားမှာတည်ရှိပါတယ် 142 Portobello လမ္း. အချိန်ကြာစွာရိုက်ကူးမှုကို, အဲရှေးဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်. ယနေ့တွင်, လိပ်စာသည်နေအိမ်မှဖိနပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်. ဒါဟာ၏အမည်အားဖြင့်အနီးအနားရှိစာအုပ်ကပြောသည်ဖြစ်ပါတယ် အဆိုပါခရီးသွားစာအုပ်ဆို မှာအခြေစိုက် 13-15 Blenheim ပိတ်အဆိုပါရုပ်ရှင်စတိုးဆိုင်များအတွက်လှုံ့ဆော်မှုခဲ့သည်.
2. ဟယ်ရီပေါ်တာ, Alnwick ရဲတိုက်, ဗြိတိန်နိုင်ငံ
ဤသည်အထင်ကရ 1,000 အသက် ... နှစ် အလယ်ခေတ်ရဲတိုက် ရုပ်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပါသည်, ငါတို့သည်ငါတို့၏ပယ်ချန်ထားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့အရာဖြစ်ပါသည်5ဥရောပစာရင်းထဲတွင်နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်နေရာများ. ဒါဟာဟယ်ရီပေါ်တာထဲမှာ Hogwarts များအတွက်တည်နေရာအဖြစ်အကျော်ကြားဆုံးဖြစ်ပါသည်. Alnwick ရဲတိုက်သည်သာများ၏တဦးတည်းအဆုံးစည်ပင်ရဲတိုက်အတွက်အင်္ဂလန်နှင့် 1,000 အသက်အနှစ်, သို့သော်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ညာဘက်မှာလည်းရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်များ၏အရာတစ်ခုခုသည်!
ဤသည်မှာပါရဲတိုက်ဗြိတိန်မှာအများဆုံးအထင်ကရတစ်ခုဖြစ်သည်, ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးပွဲအတွက်လူကြိုက်များရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်မြင်သံကြားကဲ့သို့ ဧလိရှဗက်, ရော်ဘင်ဟုဒ်: မင်းသားသူခိုး, အဆိုပါ Downton ဆွစ် ခရစ္စမတ်အထူးပါ, နှင့်၎င်း၏အကျော်ကြားဆုံးအခန်းကဏ္ဍအဖြစ် Hogwarts ေက်ာင္းစုန်းအတတ်နှင့် Wizardry အတွက်ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦး ဟယ်ရီပေါ်တာ ဇာတ်ကား.
ဒါဟာအပေါ်ရဲတိုက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံကြောင်းဟယ်ခဲ့သူ၏ပထမဦးဆုံး Quidditch သင်ခန်းစာ (ရဲတိုက်သည်ယခုအခါကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင် broomstick လေ့ကျင့်ရေး နွေရာသီလများတလျှောက်လုံး) နှင့် Weasleys Ford ကား Anglia ပျက်ကျမှုပျံသန်းရှိရာအစက်အပြောက်ကျောင်းကို၏ပထမနေ့၌ဆိုက်ရောက်.
ဘေးဖယ်ထံမှ၎င်း၏အချဉ်းအပေါ်ကြီးမားတဲ့နှင့်အသေးစားဖန်, အံ့ဖှယျရဲတိုက်ကိုလည်းကြာမြင့်စွာရှိပြီး ကြွယ်ဝသောသမိုင်း. ဒါဟာစိုက်ထူခန့် 1096 နှင့်အင်္ဂလိပ်ခရိုင်အမည်. ဒီနေ့ Northumberland ၏ Duke မှနေအိမ်နှင့်သူ၏မိသားစုသည်နှင့်ဝင်ဆာရဲတိုက်အပြီးအင်္ဂလန်မှာဒုတိယအကြီးဆုံးသူမြို့သားရဲတိုက်ဖြစ်ပါတယ်.
3. ဥရောပမှာတော့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်နေရာများ: လတ္ဆို, Dunnottar ရဲတိုက်, စကော့တလန်
အဖြစ်ဝေးသွားရဲတိုက်, Dunnottar ထက် ပို. ဝေးလံသောနှင့်သိသိသာသာတည်နေရာစိတ်ကူးရန်ခက်ခဲသည်. ဖြစ်ကောင်းနှင့်အတူအများဆုံးအပိတ်အနေအထားအားလုံးနာက္ထပ္ရဲတိုက်, ဒီတထိပ်ပေါ်မှာထိုင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်စွန်းကျွန်းဆွယ်ဖို့လမ်းမကြီးပေါ်တွင် Aberdeen, ခုခံကာကွယ်အပေါ်အားဖြင့်အားလုံးနှစ်ဖက်တပ်ဖွဲ့များ၏သဘာဝ. ဒါဟာအစသင်တန်းဒစ္စနေး Pixar Brave အတွက်မင်းသမီး Merida မိသားစုနေအိမ်ဖှယျအဘို့အကျော်ကြားနှင့် Franco Zeffirellis Hamlet အတွက် Elsinore အဘို့နှစ်ဆတိုးဖြစ်ပါသည်!
၎င်း၏တည်နေရာ၏တစ်ဦးအဖြစ်အများဆုံးသိသိသာသာဘယ်နေရာမှာမဆိုနှင့်အခွင့်အလမ်းရဖို့ရန်ပွဲအပေါ်မှာသင်၏မျက်စိချို့၏အများဆုံးဒီကဗျာ coastlinesေ. လေတိုက်မြက်ခင်းပြင်သုတ်သင်, ကမ်းပါး, နှင့်အနိုင်ယူပြီးလက်ကျန်လှိုင်းတံပိုးအားလုံးတဦးတည်းကအရမ်းရင်ခုန်စရာနောက်ခံ၌စည်းဝေးကြ.
Dunnottar လည်းရဲတိုက်ကာကွယ်ရေးသို့တစ်ခုထိုးထွင်းသိမြင်ကမ်းလှမ်းခြင်းနှင့်ဒဏ္ဍာရီနှင့်နက်နဲသောအရာတို့ကိုကောင်းတစ်ဦးထိုးရှိပါတယ်. Whigs ကြက်သင့်ရဲ့ဆံပင်ပေါ်မှာရပ်ဆုံးဖြစ်မည်အသင်းတော် (အခုပ်က္စီး) torched အားဖြင့်ဝီလျံဝေါ.
ပေမယ့် Dunnottar အတွက်လူကြိုက်များမှုတိုးပွားလာသည်, က busier စကော့တလန်ရဲတိုက်၏တဦးတည်းမဟုတ်ပါဘူး. Plus အား, ၎င်း၏အရွယ်ဆိုလိုသည်သင်အလွယ်တကူရနိုင်နေကွယ်ပျောက်ရရန်လူအစုအဝေးနှင့်ပျော်မွေ့၎င်း၏မူထူးခြားတဲ့တည်နေရာနီးပါးသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပေါ်မှာ. ဒါဟာအစ Angus Coastal လမ်းကြောင်းအပေါ်ပြီးပြည့်စုံရပ်တန့်ပယ်ဖြစ်ပါသည်, အမှန်တကယ်သာယာလှပနာက္ထပ္လမ္းခရီး.
4. ဖွဲ့စည်း, ပဲရစ်, ပြင်သစ်
သငျသညျပဲရစ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါ, ပြင်သစ်, သင်အလိုအလျှောက်တွေးကိုဖယ်မျှော်စင်. အဘယျကွောငျ့သငျသညျမဟုတျဘူး? ဒါဟာလှပ, ထိုသို့ခမ်းနားဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အားလုံးအပေါငျးတို့သအခုတော့ရွာသားတွေထဲမှာတစျထောငျအဆမြင်ကြပြီ, ပုိစတာမ်ား, ကုန်သွယ်နှင့်သတင်းဓာတ်ပုံများကတည်းကကျနော်တို့ကလေးတွေခဲ့ကြ. သို့သော်ရုံကျောက်တုံးများက Eiffel ကနေပစ်ရပ်နေသည်ကိုအမှန်တကယ်အအေးတစ်ခုခုရှိ: အနုပညာတံတား.
ပိုတငျးက de bir Hakeim ကတံတားကူးပီးအမြစ်အတွက်ပဲရစ်. တရာကျော်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းတည်သစ္စာရှိရှိဒေသခံတွေမှအမှတ်ကိုဖြတ်ကူးနေတဲ့မြစ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်, ဒါပေမယ့် 2010 ဖြစ်လာတဲ့အမှန်ရုပ်ရှင်ကြယ်ပွင့်. သောအခါ ခရစ္စတိုဖာ Nolan ရောက်ရှိလာနှင့်အတူသူ၏သင်္ဘော, အပါအဝင် ဒို, အယ်လင်စာမျက်နှာ, နှင့် ယောသပ်သည်ဂေါ်ဒွန် Levitt.
တွင် 2010 မှော်အရာတစ်ခုခုဖြစ်ပျက်အပေါ်ဒီတံတား. ဖွင့်လှစ်အတွက်မြင်ကွင်းများ, Ellen စာမျက်နှာများဇာတ်ကောင် Ariadne သင်ယူမှုကိုဘယ်လိုအိပ်မက်တွေကိုတည်ဆောက်ရန်.
5. ဥရောပမှာတော့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်နေရာများ: လရှင်အီးလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက်, Arezzo, အီတလီ
ဒီရုပ်ရှင်နေဆဲတစ်ဆောင်တတ်၏မျက်ရည်ကိုငါ၏မျက်စိအခါငါသည်အပင်ကအကြောင်းစဉ်းစား. ငါကစောင့်ကြည့်သောဤနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကျောင်းမှာနှစ်ပေါင်းများစွာအၾကာက, ထိုသို့စွန့်ပစ်ဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ငါ့အချက်မှတ်ထားမှု. ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိကြည့်ဖို့သွားကြပြီအဘယ်ကြောင့်ဤသူကားအ! ရောဘတ် Benigni 1997 အနိုင်ရတဲ့အော်စကာ la Vita အီး Bella (ဘ0ကလှပတယ်) အလက်! အစုသာ်, ဒါဟာ၏ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြ၊တစ်ဦးကိုဂျူးအီတလီအမည်ရှိ Guido Orefice. သူနှင့်တွေ့ဆုံနှင့်အတူမေတ္တာ၌ကျရောက်အဆင်းလှသောအလွန်သူတို့သည်အသက်အရွယ်, Giosue, အတူတူ.
အဆိုပါဇာတ်လမ်းကို Guido မိသားစုနှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့ဘဝသူတို့တစ်တွေချွေးတပ်စခန်းခေါ်ဆောင်သွားကြသောအခါဇောက်ထိုးလှည့်ရအကြောင်း. ရှိပါတယ်နေစဉ်, နိုင်ရန်အတွက်အမိုးအကာမိမိသားအကြောက်မက်ဖွယ်ရာများမိမိပတ်ဝန်းကျင်, Guido အသင်းသားတစ်ဦးပီပီဇာတ်လမ်း. သူတို့ရဲ့အချိန်အတွက်စခန်းအမျှဂိမ်း. တော်တော်များများစုံဖြတ်ပြီးရုပ်ရှင်၏အစအဦး၏အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းရိုက်ကူး, သို့သော်, အချစ်စရာကောင်းတဲ့ Tuscan မြို့၏Arezzo.
Bologna to Arezzo လက်မှတ်တွေ
သငျသညျဖြစ်စေစောင့်ကြည့်ဖို့အဲဒီရုပ်ရှင်ကားတွေထဲကဒေါင်းလုတ်လုပ်ဖို့အဆင်သင့်ရတဲ့သို့မဟုတ်အကျိုးဆက်ပြီးသားသင့်ရဲ့ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်နေကြပါတယ်, သငျသညျမဟုတျပါ? အဘယ်ကြောင့်မအလုပ်နှစ်မျိုးလုံး! ကူးအပေါ်ခေါင်း တစ်ဦးကရထား Save နှင့်တမိနစ်အတွင်းတစ်ဦးလက်မှတ်ဘွတ်ကင်5ဥရောပ၌နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်နေရာများ!
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “5 ဥရောပမှာတော့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်နေရာများ” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffamous-film-spots-europe%2F%3Flang%3Dmy – (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
europetravel ရုပ်ရှင်ရုံ ဇာတ်ကား ရုပ်ရှင်အစက်အပြောက် trainjourney Tranride